Shaqa ka Fariisigii la Filayay oo Baaqday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
HESHIISKII URURKA SHAQAALAHA IYO MULKIILEYAASHA EE BADEECADDA
Shaqa ka Fariisigii la Filayay oo Baaqday
La cusbooneeyay fredag 13 april 2012 kl 13.30
La daabacay torsdag 12 april 2012 kl 19.13
Fiidnimadii shalayto ayey wada-hadal muddo dheer socday kadib heshiis sannad socon doona qalinka ku duugeen ururka shaqaalaha badeecadda iyo dhiggiisa ee shaqa-bixiyeyaasha. Iyadoona ay meesha ka baxday shaqa ka fariisigii uu hore u shaaciyay ururka shaqaalaha ee Handel oo lagu tallaabsan lahaa.
Heshiiska ey labada garab wada-jirka uu gaareen ayaa qeexaya in xubnaha ururka ee ka howl-gala dukaammad ey heli doonaan muddada sannadka ee heshiiskaasi socdo mushaarad dheeriya ee gaarsiisan 710 koron bishii, waana dakhli u dhigma 3,3% shaqaalaha badeecadda ee mushaarkoodu gaarsiisan yahay 21.000.
Isku cel-celis waxaa dhammaan uu shaqaalahaa mushaarooyinkoodu kor u kici doonaa 390 midkiiba.
Halka uu heshiiskaasi sidoo kale siinayo shaqaalaha ka howl-gala bakhaaradda 665 koron bishii muddo sannad ah.
Anna Persson oo ka howl-gashaa dukaan ICA ee dhaca bartamaha magaalada Istockholm waxayna sheegtay inay aad ugu qanacsan tahay heshiiska la gaaray:
- Aad ayaan uga helay in go'aan sidaa loo gaaro. Waxaan qabay in heshiis uu dhex-mari doono, sidaa ayayna u dhacday. Mar ay Anna Persson ka warramaysa natiijadana waxay tiri:
- Waa natiijo aad u wanaagsan sida ay iila muuqato. Farqiguna noqon maayo mid aad u wayn ragga iyo dumarka sidii uu ay hore u ahaan jirtay.
Maamulka dhexe ee ururrada shaqaalaha ayaa hore heshiis uga gaaray in xoogga la saaro inta lagu guda jiro waanwaanta wada-hadalka ee kordhinta mushaarooyink dhanka sinnaanta ragga iyo haweenka.
Iyadoona uu hogaamiyaha ururka shaqaalaha ee badeecaddu Lars Anders Häggström sheegay in guul middaa laga gaaray, maadaama lagu heshiiyay
mushaar-kordhin ka ballaaran 2,6% sidii uu horey u galay ururka shaqaalaha ee warshaduhu:
- Waxaannu ku guuleeysaney go'aankii hoggaanka daladda ururrada shaqaalaha ee la xiriiray sinnaanta mushaarooyinka. Waxaan sidoo kale tallaabo wayn hore ugu qaadnay kolka laga hadlayo shaqaleeynta joogtada ah, siday ila tahay. Sidoo kale waxaan ku guuleeysaney inaan saameeyn ku yeelanno shaqaalaha ka yimaada shirkadaha kireeya xoogsatada, qaasatan kolka laga hadlayo bakhaarrada.
- Iyo weliba inaan ku guuleeysaney heshiis noocyada shaqada ee tababarka sidii suuqa shaqada loogu sahli lahaa dhallin-yarada.
Halka uu agaasimaha shurkadleyda badeecaddu sheegay in ururkiisuna helay go'aammo la xiriira in dhaqaalaha qaarkii meelo kale laga baajin karo, sidaa daraadeedna noqon mayso mushaar-kordhintani mid la timaadda kharash dheeriya ee sidaa u ballaaran:
- Waxaa lagu heshiiyay dhallinyarada iyo goobaha tababarka shaqada. Inaan kor loo dhigin mushaaradda ugu horeeysa kolka shaqa la bilaabayo. Marka waxaa jira dhinacyo badan ee heshiiskani ku wanaagsan yahay.
Hsehiiskan dabadii ayey sidoo kale foodda innagu soo hayaan wadahadalkii ururrada shaqaalaha ee degmooyinka, huteellada iyo maqaayadleyda iyo sidoo kale dhismooyinka. Iyadoona uu hore ururka daladda ururrada mulkiileyaashu gudoomiyahoodu Kenneth Bengstsson hore u sheegay in mushaar-kordhinta dheeriga ah ee ururka badeecaddu dalbaday halis ku yahan nidaamka wada-hadalka ee garabyada, halka uu iminka ka yara degay halkii uu hore u taagnaa